Wax kastoo ay tahay shaqadeena ama heerkeena mas'uuliyadeed, waa inaan maareynaa mashaariicda iyo howlaha u baahan wada shaqeynta. Waxaan dhamaanteen awoodnaa inaan wada shaqeyno mid walbana wuxuu noqon karaa xubin wax ku ool ah. Tababarkan oo laga soo qaatay casharkii asalka ahaa ee Chris Croft, soo hel farsamooyinka iyo jidadka milicsiga ee looga dan leeyahay hubinta wadajirka wanaagsan ee ka dhexeeya shaqaalaha. Tababarahaaga Marc Lecordier wuxuu ku siinayaa furayaasha guusha ee horumarinta iyo xoojinta wada shaqeynta. Guushu had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa qofku inuu si hufan ula shaqeeyo dadka kale.
Kooxda shaqeeya Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Hordhac Excel iyo hawlgallada aasaasiga ah
horeRaadinta telefoonka ee guuleysta
socdaSaamaynta dadka kale
Su'aalaha iyo jawaabaha Shaqooyinka Frank
Heshiisyada wadajirka ah: loo shaqeeyuhu waa inuu muujiyaa inuu si wanaagsan u abaabulay la socoshada culeyska shaqaalihiisa maalmaha xirmooyinka
Coronavirus: Caawiyayaasha guryaha waa inay shaqeeyaan? Maxaa caawimaad ah iyaga?